न्यूजिलेण्ड, एडमण्ड हिलारी र म
म न्युजिल्यान्ड छिरे देखि नै मनमा एउटा कौतुहलताले डेरा जमाईसकेको थियो । सर एडमण्ड हिलारी पनि न्युजिल्यान्डकै बासिन्दा हुन् भन्ने थाहा भए देखि नै कौतुहलता बढेको थियो ।सगरमाथा पहिलोपल्ट आरोहण गर्ने हिलारी र तेन्जीङ नोर्गे साथी हुन्, उनीहरू सँगै सगरमाथा आरोहण गरेका हुनाले मलाई लागिरहेको थियो, म कतै उनको ठाउँमा पुग्न सक्छु कि भनेर ।
उनको जन्मठाउँमा पुगेपनि मैले गर्ने त केही होईन तर पनि त्यो ठाउँमा सगरमाथा र नेपाललाई कसरी हेर्छन् भन्ने चासो चाहिँ थियो । उनको जन्मभूमि अकल्याण्ड शहर हो तर हामीसँग माया गाँसिएको ःयगलतअययप भयो ।
अन्नतः 2020जुलाई 18 तारिकका दिन म उनले सगरमाथा आरोहण गर्नु भन्दा पहिले आरोहण गरेको न्युजिल्यान्डको उच्च हिमाल Mountcook पुगेँ । साथमा छोरी ज्वाइँ र नाति समेत थियौँ दुईवटा आइसल्याण्डमा बनेको न्युजिल्याण्डको दक्षिण आईसल्याण्डकोMackenzie district मा अवस्थित Mountcook को उचाइ घठद्दद्ध मीटर अग्लो रहेछ । Hooker lake को काखमा थपक्क बसेको रहेछ ।
राजन कार्की कृत ‘आमा’ नामक कृतिमा उल्लेख भए अनुसार तेन्जिङ नोर्गे भरियाका रूपमा गएका र उनले सगरमाथा चढिसकेपछि हिलारीलाई डोरीले तानेको भनेर उल्लेख छ । तेन्जिङको जन्मठाउँको बिषयमा यसरी लेखिएको रहेछ ब्रिटिस लेखक म्यलकम वार्न्सका अनुसार नेपालको कोखमा जन्मेँ, भारतको काखमा हुर्किएँ । जे भएता पनि मलाई गर्व के लाग्यो भने–न्युजिल्यान्डका मानिसहरू उनलाई नेपाली र सगरमाथा नेपालको भनेर खुब चिन्दा रहेछन् । फेरि अमेरिकाबाट प्रकाशित पुस्तक ‘टाइगर अफ द स्नोज’ मा तेन्जिङले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई भनेका रहेछन्– म नेपाललाई माया गर्छु । म यहिँ जन्मे । अब यति भए पछि गर्व नहुने कुरै भयन ।
जब हामीMountcook को फेदीमा पुगेउँ अझ खुशी त के लाग्यो भने त्यहा आएका पर्यटकहरू भनिरहेका थिए यही हिमाल आरोहण पछि हिलारीले नेपालको सगरमाथा आरोहण गरेका अरे ।त्यहा आउने पर्यटकहरू नेपाली, भारतिय, ब्रिटिस, अष्ट्रेलिया तथा अन्य थुप्रै देशका थिए । उनिहरूले पटक पटक नेपालको नाम उच्चारण गर्दा खुशीले गद् गद थियौँ हामी । अनि हामी अलि चर्को स्वरले नेपालीमा कुरा गरिरहेका थियौँ ।केही अन्य पर्यटकले सोधे तिमीहरू कहाँबाट ? हामी पनि के कम फुर्किँदै भन्यौ नेपालबाट । अनि त सुरू भयो वाह नेफोलबाता । नेफोलीहरू । हिलारीलाई चिन्छौ भनेर सोधे ? मैले गर्वसाथ भने हाम्रै सगरमाथा चढेर पपुलर भएका हुन् । उनीसँगै हाम्रा तेन्जिङ पनि सगरमाथा चढेका । तिमीहरू सगरमाथा चिन्छौ ? सोधेँ मैले । भाषागत कठिनाई हुँदा छोरीले बुझाउथिन् उनीहरूलाई ।
सगरमाथा र एडमण्ड हिलारीपर्यायवाची नै मान्दा रहेछन् । न्युजिल्यान्डका धेरै किवीहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका रहेछन् । पोखरा,सौराहा, अन्नपुर्ण बेसक्याम्प तथा अन्य ठाउहरूका नाम फटाफट भन्दैथिए । त्यहाँको क्वीन्सटाउन शहरलाई त न्युजिल्यान्डको पोखरा पो भन्दा रहेछन् । क्वीन्सटाउन घुम्न गएपछि पोखरा नै देखेजस्तो अनुभूति भयो ।
भारतको मेँगलुरूमा पढ्न बस्दा मेरी छोरी साथीसँग गुजरात घुम्न आईछन् । साथीको आमाले घर कहाँ हो भनेर सोध्दा नेपाल भनिछन् । अनि भारतको प्रदेश हो नि नेपाल भन्ने छुट्टै देश छैन भनेर साथीको आमाले भनेपछि उनले नेपाल मेरो देश तिम्रो भारतभन्दा विशाल छ । हामीसँग सगरमाथा छ । हामीसँग बुद्ध छन् । भगवानले तपस्या गरेको तपोभूमि तिम्रो भारतको कसरी हुनसक्छ भनेर झगडा नै गरिछन् । त्यसपछि नेपाल फर्केर उनी भारत पढ्न गए पनि हाम्रो देश नचिन्ने छिमेकमै छन् तर हाम्रो देश, हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो पोखरा चिन्ने सातसमुन्द्र पारीका ती विशाल मन भएकाहरूलाई नमन गर्न मन लाग्यो ।
Mountcook प्रत्यक्ष दृश्यावलोकन Hookerlake मा बरफमाथि उभिन पाउँदाको क्षण मेरा लागि अविष्मरणिय त रह्यो नै । अनि नेपाल र सगरमाथाको नाम गर्वसाथ लिएको त्यो क्षणले आल्हादित तुल्यायो ।
न्युजिल्यान्डका हरेक शहरमा नेपालीहरूलाई आफन्तको रूपमा हेर्दा रहेछन् । वानाकामा अपरक्लुथा लायन्स क्लवमा मेरी छोरी पनि सदस्य बनेकी रहिछन् । उक्त क्लवमा उमेरले साठी कटिसकेका महिलाहरूको सँख्या बढि रहेछ । एकदिन लायन्स मिटिङमा एन र उनका पति डेभले निमन्त्रणा गरे मलाई पनि । उनले एउटा आग्रह गरिन् मसँग । भनिन् तिमी तिम्रो देशको कल्चरल ड्रेसमा आउ ल । मैले पनि सहमति जनाएँ । बेलुका लिन आए हामी गयौँ । म सारी ब्लाउजमा थिएँ । त्यहाँ कार्यक्रम तोकिएको समयमा शुरू र तोकिएकै समयमा अन्त भयो । एन हर्षबिभोर थिईन् । उनले सम्मानका लागि लायन्सकी तत्कालिन अध्यक्षलाई भनिसकेकी रहिछन् । सबैको केन्द्रबिन्दु म थिएँ । मसँग परिचय गर्न आएका उनका साथीहरूले कुन देशको भनेर सोद्धा एनले नेफोलको भन्दै थिईन् । ८० बर्ष उमेरको हाराहारीमा पुगेकी महिलाले सँगै फोटो खिचिन् र भनिन् आई लव नेफ्लिज । उनले पनि मौका गुमाईनन् हिलारी, तेन्जिङ र सगरमाथाको नाम जोड्न । मलाई साँच्चै शिरमा सगरमाथा बोकेरै गएको अनुभूत भयो । हाम्रो देश, हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो तेन्जिङ र समस्त नेपालीलाई माया गर्ने ती सहृदयी मनहरूलाई सप्रेम माया अनि सम्झना ।